The Rohingya News Bank : ကန့်ကွက်
Showing posts with label ကန့်ကွက်. Show all posts
လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာဘက်ကရပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်အစီအမံတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ အမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် သဘောတူညီချက် မရခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ရာ ရောက်စေနိုင်မဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဟန့် တားနိုင်အောင် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းဖို့ ကြေညာချက်ထုတ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြရာမှာ မြန်မာနဲ့ အဓိက မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေက ကန့်ကွက် ခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: 2020, ICJ, mm, ကန့်ကွက်, ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ, တရုတ်, ဗီယက်နမ်, မြန်မာ
ICJ အမှု ရင်ဆိုင်ခဲ့သည့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့ကို ထောက်ခံကြောင်း အရေးကြီးအဆို ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ် တော်တွင် ရှုံးနိမ့်
အိုင်စီဂျေ တရားရုံးမှာ အမှုသွားရောက်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အဖွဲ့ကို ထောက်ခံကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုတင်ရာမှာ ကန့်ကွက်သူ များလို့ ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း တင်သွင်းတဲ့ အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ရှမ်းလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ စဝ်အောင်မြတ်နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦးက ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ် ခဲ့တာပါ။
Labels: 2019, ICJ, mm, ကန့်ကွက်, ဒီဗွီဘီ, ရှမ်းပြည်နယ်, သတင်း
အဖွဲ့ဝင် ၂၂ နိုင်ငံနဲ့ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံ ပါဝင်တဲ့ IORA အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှောက်ထားချက်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါ တယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် - ၆ ရက် မှာ UAE အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု Abu Dhabi မှာ ကျင်းပတဲ့ IORA ကောင်စီရဲ့ CSO အကြီးတန်းအရာရှိများရဲ့ ၂၁ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး မှာ မြန်မာက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒုတိ ယအကြိမ် ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, IORA, mm, ကန့်ကွက်, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
မြန်မာအရေး အိုင်စီစီသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ကုလအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချို့ တောင်းဆိုချက်ကို ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက် ကြောင်း သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းပြောကြား
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ (၂၆)ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ရှင်းလင်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − MOFA)
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချို့က မြန်မာအရေးကိစ္စ ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုဆိုင် ရာ တရားရုံး (ICC) သို့ လွှဲပြောင်း ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို မြန် မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံ အမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒို ဆွမ်းက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICC)၏ ၂၀၁၈-၁၉ အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက် aသာ အစီရင်ခံစာ ကို နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကုလ အထွေထွေညီလာခံ၏ (၂၆)ကြိမ် မြောက် မျက်နှာစုံညီ အ စည်းအ ဝေး၌ ဆွေးနွေးရာ မြန်မာသံအ မတ်ကြီးက ယင်းသို့ထည့်သွင်း ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အထူးသဖြင့် အစောပိုင်း က ဒီခန်းမထဲမှာ ကနေဒါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုအပါအဝင် ကုလအ ဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံတချို့ရဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘဲ မြန်မာအရေးကို ICC လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကို ကျွန် တော်တို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပယ်ချ ပါတယ်’’ဟု ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက ကုလသမဂ္ဂသို့ ပြောသည်။
Labels: 2019, ICC, mm, ကန့်ကွက်, ကုလ, မြန်မာ, သတင်း, ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း
ဘက်မလိုက် အစည်းအဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီး ပြောစကားကို မြန်မာ ကန့်ကွက်
ကော့စ်ဘဇားခရိုင်အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတခုအတွင်း ရိက္ခာတန်းစီနေကြစဉ် / Reuter
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာကို လူမျိုးစုသုတ်သင်မှုနှင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် ဘာကူးတွင် ကျင်းပသည့် ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှု (NAM) ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ကို နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ရခိုင်ပြဿနာအပေါ် ပြောကြားချက်ကို တုန့်ပြန်ရာတွင် ရခိုင်ပြဿနာသည် မှား ယွင်းစွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း လူမျိုးစု တခုကို နိုင်ငံပြင်ပသို့ မောင်းထုတ်ခြင်းမရှိကြောင်း လွန်ခဲ့ သောတ ပတ်က ကျင်းပသည့် အထက်ပါအစည်းအဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဦးကျော်တင်က NAM ဝန်ကြီးများ အား ပြောကြားကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Labels: 2019, ARSA, mm, ကန့်ကွက်, မြန်မာ, ဘက်မလိုက်အစည်းအဝေး, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဦးကျော်တင့်ဆွေ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မျိုးနွယ်စုအား သုတ်သင် ရှင်းလင်းခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ခြင်းဟု ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ သုံးနှုန်းပြောကြားချက်ကို မြန်မာကန့်ကွက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေမှုကို တွေ့ရစဉ် (Photo: MOFA)
ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မျိုးနွယ်စုအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးသုဉ်းသတ် ဖြတ် ခြင်းဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ သုံးနှုန်းပြောကြားချက်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့် ကွက် ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောကြားသည်။
Labels: 2019, mm, ကန့်ကွက်, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဦးကျော်တင့်ဆွေ
FFM ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြ
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် FFM ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ FFM အဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ၂၀၁၉၊ သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြစဉ် ဓါတ်ပုံ - ကျော်လွင်ဦး/ RFA
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် FFM ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက် ကြောင်းနဲ့ FFM အဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ရာကျော် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဒီနေ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, FFM, mm, RFA Burmese, ကန့်ကွက်, ကုလသမဂ္ဂ, ဆန္ဒပြ, သတင်း
စစ်တပ်စီးပွားရေးကို ပိတ်ဆို့ရေး အကြံပြုချက် မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးရုံး ဆန့်ကျင်
6 ဩဂုတ် 2019
မြန်မာ စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ စစ်တပ်ကို ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းက စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ အ ချက်အလက် ရှာဖွေရေး မစ်ရှင် FFM ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက အသိအမှတ်မပြု ကြောင်း ကြေညာ ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
Labels: 2019, FFM, mm, ကန့်ကွက်, မြန်မာ, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာကို မြန်မာ ကန့်ကွက်
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters
ဂျီနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်း ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ တဖက်သတ် ဖော်ပြထားချက် တွေ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ထောက်ပြ ပြောကြားလိုက်ပါ တယ်။
Labels: 2019, mm, ကန့်ကွက်, ကုလသမဂ္ဂ, မြန်မာ, ဘီဘီစီ မြန်မာ, လူ့အခွင့်အရေး
ရိုဟင်​ဂျာအတွက်​ Safe Zone နောက်ဆုံးမှာ တရုတ်​သ​ဘောတူ လိုက်ပြီ (ပူးတွဲ ကန့်ကွက်စာများ)
ရိုဟင်​ဂျာများမိမိဌာ​နေသို့ဂုဏ်​သိက္ခာရှိရှိ ပြန်​နိုင်​​ရေးအတွက်​ လုံခြုံ​ဘေးကင်းရာဇုံ နယ်​​မြေကို ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ အတွင်းထူ​ထောင်​​ရေးအတွက်​ တရုတ်​က ​နောက်​ဆုံးတွင်​သ​ဘောတူညီလိုက်​သည်​။
မြန်​မာပြည်​အတွင်း safe zone ထူ​ထောင်​​ရေးအတွက်​ ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရှ်​အစိုးရက အစဉ်​တစိုက်​​တောင်းဆို ခဲ့ပြီး မြန်​မာအစိုးရကမူ safe zone ကိုနိုင်​ငံတကာကအုပ်​ချုပ်​မည်​ဖြစ်​သည့်​အတွက်​ အချုပ်​အခြာအာဏာပိုင်​ဆိုင်​မှု ကိုထိခိုက်​​စေသည်​ဆိုကာအစဉ်​တစိုက်​ကန့်​ကွက်​ခဲ့သည်​။
Labels: 2019, mm, safe zone, ကန့်ကွက်, တရုတ်နိုင်ငံ, မြန်မာ, သတင်း
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)၊ 23 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019 မေခ
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အနှစ်သာရကိုပျက်ယွင်းသွားမယ်ဆိုရင် တပ်မတော် ဘက်က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တပ်မတော်တာဝန်အရ အခြေခံဥပဒေ ရဲ့အနှစ်သာရမ ပျက်အောင် ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အငြင်းပွားနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီမှာလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိပါးလာရင် ကန့်ကွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မေခက ပေးပို့ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ကန့်ကွက်, တပ်မတော်, ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ, ဗွီအိုအေ, သတင်း
( 27.11.2016 ) “ဘီဘီစီမှ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်‌ခဲ့သည့်‌ အစီအစဉ်အပေါ် မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့မှ ကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားရှိမှု”
“ဘီဘီစီမှ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်‌ခဲ့သည့်‌ အစီအစဉ်အပေါ် မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့မှ ကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားရှိမှု”
Response by Myanmar Embassy to the BBC World News Program.
Labels: 2016, BBC, London, MIC, mm, UK, ကန့်ကွက်, မြန်မာသံရုံး, သတင်း